IKHAYA LAM SCANDI 2 - I-Airbnb
IKHAYA LAM SCANDI 2
Wamkelekile ku "My Scandi Home2"
Siyakumema ukuba uchithe iholide yakho engalibalekiyo kwindlu epholileyo ngaselunxwemeni loLwandle lwaseKiev kwidolophu evaliweyo kwidolophana yaseGlebovka. . On site kukho izindlu ezimbini, nganye eneyazo yonke into kufuneka ukuba abadala 2 kunye nabantwana 2. Indlu inegumbi le studio, igumbi lokulala, igumbi lokuhlambela, iterrace.
Izindlu zethu zinekhitshi elinezixhobo, igumbi lokulala elingasese, igumbi lokuhlala elinendawo yokutyela, isofa. ITerace ejonge echibini kunye nengca eluhlaza. Ilali yethu izolile kwaye ilawulwa lusapho, ngoko ke amatheko anengxolo AYAVELEKILE !!!
Kwintsimi kukho ichibi elidityanisiweyo lezindlu ezimbini, Siyakucela ngobubele ukuba ulumke kwaye unikele ingqalelo xa uyisebenzisa, INGAKUMBI LANDELA ABANTWANA, idama alikho nzulu, kodwa linamanzi kwaye LIYINGOZI!
Ilali inemithetho engqongqo ngombane ngoko ke i-10 kW yombane yabelwa izindlu EZIMBINI, ukuba urentile izindlu ezimbini ze nifike nilusapho olunye, sicinga ukuba akuzubakho ntlungu ingako, kodwa ukuba nihlala nabamelwane, umntu ngamnye. ndlu iya kuba 5 kuphela kW amandla, kuya kufuneka ukuba ukusetyenziswa kwamandla ukulawula (ungamnikeli kwi iketile kwaye ukuyambesa ngaxeshanye, njalo njalo)
Lo ngumthetho kuwo wonke umntu, Sihlala ebumelwaneni kwaye sele siqhelene nayo.
Sijonge phambili ukuhlala kwakho ixesha elide, siya kukunika isipho esikhethekileyo.